ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သံလျင် ရှိ ရောင်းရန် Land For Sale in Thilawar (ID-308), ခြံ ၊ မြေကွက် | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - ခြံ ၊ မြေကွက် - Land For Sale in Thilawar (ID-308)
Land for sale in Thilawar industrial zone, Than Lyin Township.
Land Area - 3.75 Acres, Grant land.
Asking price for 1 Acre - 6000 Lakhs (Nego)
Land For Sale in Thilawar (ID-308)
သန်လျင်မြို့နယ် သီလ၀ါစက်မှုဇုန်အတွင်း ရောင်းရန် မြေ ဖြစ်ပါသည်။ မြေဧရိယာ -၃.၇၅ ဧက ၊ ဂရန်မြေ ဖြစ်ပါသည်။
မြေ ၁ဧက အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၆၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)
သီလ၀ါစက်မှု့ဇုန်ရှိ ရောင်းရန် မြေ (ID-308)
Property ID: S-1185937
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Land For Sale in Thilawar (ID-308)
Code-7051 သန်လျင်မြို့နယ်တွင် ခြံခတ်ပြီး ပါမစ်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
ShwePyout Village (ရွှေပြောက်ကျေးရွှာ)
AungChanThar Ward (အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်)
သန်လျင် သီလဝါအနီး မြေကွက်ရောင်းမည်
ဦးလှထွန်းလွင်လမ်း၊ သောက်ရေတွင်းရပ်ကွက် ၊ သံလျှင်မြို့နယ် တွင် မြေကျယ်ကျယ်မြေကွက်ရောင်းမည်
Shweproperty ID: S-1185937